Football Khabar » कोपा इटालियाको सेमिफाइनलमा रोनाल्डो र ज्लाटन भिड्ने !
कोपा इटालियाको सेमिफाइनलमा रोनाल्डो र ज्लाटन भिड्ने !
स्वीडेनका भेट्रान फुटबलर ज्लाटन इब्राहिमोभिच पोर्चुगलका सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डोका खरा आलोचकमध्ये एकमा पर्छन् । केही समयअघि इटालियन क्लब एसी मिलानमा अनुबन्ध हुनुअघि एक अन्तर्वार्तामा कुरा गर्दै ज्लाटनले आफूले इटालीमा क्रिस्टियानो रोनाल्डो छन् भन्ने थाहा नपाएको बताएका थिए । उनले भनेका थिए– ‘मैले इटालीमा एक मात्रै रोनाल्डो देखेको छु, रोनाल्डो नाजारियो ।’
त्यसको केही दिनमै मिलान पुगेपछि उनको बोली फेरियो । मिलानको जर्सीमा सार्वजनिक भएपछि उनले केही नरम कुरा कुरा गरे । उनले भने– ‘म यहाँ आइपुगेको छ । क्रिस्टियानोसँग प्रतिस्पर्धा दोहारिएको छ, के हुन्छ हामी हेर्छौं ।’
उनै ज्लाटन र रोनाल्डो इटालीमा पहिलोपटक आमनेसामने हुने टुंगो लागेको छ । कोपा इटालिया फुटबलको सेमिफाइनलमा युभेन्टस र एसी मिलानको भिडन्त हुने भएको छ । गत राति अन्तिम आठमा भएको खेलमा मिलानले टोरिनोलाई ४–२ ले हराएपछि युभेन्टस र मिलान फाइनल पुग्न भिड्ने भएका हुन् ।
रोनाल्डोको टिम युभेन्टस भने त्यसअिघ नै रोमालाई ३–१ ले हराएर सेमिफाइनल पुगेको थियो । अब उपाधि जित्न फाइनल पुग्न युभेन्टस र एसी मिलानले एकअर्कालाई पन्छाउनुपर्ने भएको छ ।
यता, अर्को सेमिफाइनल खेल्ने एक टोली नापोलीको टुंगो लागिसेकेको छ । दोस्रो टिमको टुंगो आज राति हुने दोस्रो खेलबाट लाग्नेछ, जहाँ इन्टर मिलान र फियोरेन्टिनाको भिडन्त राति १ः३० बजेबाट सुरु हुनेछ ।
कोपा इटालियामा रोनाल्डो र ज्लाटान भिड्ने भएपछि यस खेललाई महत्त्वसाथ हेरिएको छ । आफ्नो करिअरमा सर्वाधिक सफल खेलाडी रोनाल्डोका एक कडा आलोचक एकअर्कामा भिड्ने भएकाले यो खेल धेरैका लागि प्रतीक्षाको खेल बनेको छ ।
अघिल्ला चरणमा सिंगल खेल भए पनि कोपाको सेमिफाइनलमा भने होम एन्ड अवे गरी दुई खेल हुनेछन् । पहिलो लेगको खेल मिलानको घरमा फेब्रुअरी १२ तारिखमा हुनेछ । दोस्रो लेग युभेन्टसको घरमा मार्च ४ तारिखमा हुनेछ ।
ज्लाटन उनै खेलाडी हुन्, जो क्लब फुटबल च्याम्पियन्स लिग र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि रोनाल्डोबाट सधैं पीडित बन्दै आएका छन् । आजसम्म एकपटक पनि च्याम्पियन्स लिग जित्न नसकेका ज्लाटनले सन् २०१४ को विश्वकप रोनाल्डोकै कारण खेल्न पाएका थिएनन् ।
त्यसबेला विश्वकप खेल्ने छनौट चरणको प्ले अफ्मा रोनाल्डोको टिम पोर्चुगल र ज्लाटनको टिम स्वीडेनको भिडन्त थियो । तर, निर्णायक खेलमा रोनाल्डोले स्वीडेनविरुद्ध सनसनीपूर्ण ह्याट्रिक हानेपपछि पोर्चुगल विश्वकपमा छानियो भने ज्लाटन विश्वकप यात्रामै निस्कन पाएनन् ।
प्रकाशित मिति १५ माघ २०७६, बुधबार १७:२७